Iphupha likaGabriel, ikhaya elizolileyo echibini kwiiNtaba zeWV - I-Airbnb
Iphupha likaGabriel, ikhaya elizolileyo echibini kwiiNtaba zeWV
Terra Alta, West Virginia, United States
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguDavid
I-95% yeendwendwe zakutshanje inike uDavid iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Indlu entle enechibi enamabali amabini ekwiintaba ezipholileyo zaseWest Virgina. Zonke izinto ezenza uzive usekhaya kunye nekhitshi elinento yonke, i-WiFi, i-cable TV, i-Roku, i-BBQ grill, i-patio swing, kunye nomgangatho wokubona izilwanyana zasendle ezikujikelezileyo. Efumaneka eAlpine Lake Resort, indawo ebiyelweyo eTerra Alta, eWV, uza kukwazi ukuya kwindawo yokudlala igalufa yemingxuma eyi-18, ipuli enamanzi ashushu ngaphakathi, i-gameeroom, i-mini-golf, indawo yokujima yangaphakathi, iivenkile zokutyela, iindlela zokunyuka intaba, ichibi eliyi-150 acre lokuqubha, ukuloba nokuhamba ngephenyane.
Ikwimizuzu eyi-15 ukusuka e-Dawn Creek nase-Oakland, e-MD, enye intsapho ye-resort equka i-wisp resort yokutyibilika ekhephini kunye nokutyibilika ekhephini kunye nezinye izinto ezenziwayo ngamaxesha athile onyaka. I-Deep Creek Lake yindawo yokudlala eyi-5.67 yeemayile zeemoto, i-jet skiing, ukuloba, ukuqubha kunye nokuhamba ngephenyane. Nyuka intaba uye eSreon Falls State Park eOakland Maryland. Kukho iindawo ezininzi ezinomtsalane kumgama omfutshane wokuqhuba ukusuka ePennsylvania, eWest Virgina naseMaryland ejinga emanzini amhlophe, iitreyini ezintle, imiqolomba kunye nemimangaliso yendalo neyenziwe ngabantu. Imizuzu eyi-35 xa uqhuba iza kukusa eMorgantown, WV, ikhaya leWwagen Mountaineers.
Eli khaya liquka i-pac nokudlala, isitulo esiphakamileyo, amasango okhuseleko kwizitebhisi ukunceda ukukhusela abantwana abancinci kunye nezilwanyana zasekhaya. Ibala lokudlala, iinkundla zentenetya ne-basketball nakwi-resort.
I-HDTV ene-intambo yepremiyamu, I-Roku, I-Hulu, I-Netflix, izitishi zeTV eziqhelekileyo, I-HBO Max, I-Disney+
4.84 · Izimvo eziyi-94
Indlela esiyithandayo yokuqalisa usuku kukuhlala everandeni umamele kwaye ubukele iintlobo zeentaka, ii-chipmunks, i-deer kunye nezinye izilwanyana zasendle. Ngorhatya, ukuhambahamba echibini, ingakumbi xa inyanga iphezulu, yindlela entle yokuphelisa imini. Abanikazi-mzi kunye neendwendwe banobubele kakhulu kwaye banceda, kwaye akukho mntu unabantu abaninzi. Indlela yethu "ikude kwindawo engaqhelekanga" kwaye ikwinduli yechibi kwaye ingaphantsi kweemayile eziyi-1/4 ukusuka elunxwemeni/kwindawo yokuqubha. Onke amakhaya nezinto onokuzisebenzisa zigcinwe kakuhle ibe zineenkonzo unyaka wonke. Kukho Ibhere kwindawo kunye nenkunkuma ekhuselekileyo ecaleni kwendlela yokungena, ngoko nceda uqaphele ukuba ungashiyi ukutya/inkunkuma/izinto zokupholisa phandle. Kucetyiswa ukutshixa umnyango wemoto yakho kuba iibhere zinokuzivula.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Terra Alta